Zvakakosha kuyeuka kuti pakanyorwa Bumbiro, "Press" raive boka remagag-tag vagari vaive nemichina yekudhinda. Vakanga vasiri iwo makambani makuru aive akatungamirwa neane simba rese rekushambadzira dhora sezvaari mazuva ano. "Bepanhau" raiwanzove rekushora, rimwe chete pepa, iro rakashungurudza hurumende. Pepanhau rekare, Hartford Courant, rakatomhan'arirwa naThomas Jefferson kuti ane mhosva ... uye akarasikirwa.
Inzwi rakajairika? Inofanira. Zvakafanana nekuva, toti, webhusaiti kana blog. Iyi ndiyo inotevera "Press" uye yakapusa blog blog inogona kunge inotaridzika zvakanyanya sezvakaitwa nemapepanhau mumakore ekutanga enyika yedu huru. Masangano akaita se Electronic Frontier Foundation ita shuwa kuti rusununguko irworwo rwakaramba ruchichengetedzwa. Tora tariso imwechete pawebsite yeEFF uye iwe unowana yakawanda yemienzaniso yemabhizimusi makuru kuyedza kutora pane mukomana mudiki.
Mushure mekufamba kwemari, nyaya inochinja handiti? Vatori venhau veNBC vanowanikwa vachisvetuka majeti nevashambadzi, kupokana kwekufarira. Vaimbi vanokanganwa mazuva ekuti hapana munhu anokoshesa hunyanzvi hwavo, uye ivo vanodzosera iyo RIAA kurwira kuenderera nekuunganidza mamirioni kuitira kuti Cristal irambe ichiyerera uye inotevera bling inogona kutengwa. Uye mawebhusaiti nemakambani einternet anoita kuti mamirioni akanganwe kuti ivo vakatanga neakarova kamwe, kamwe chete kutendeuka.
Google ikozvino inobvuma kuti vakakanganisa mukuvhura bhizinesi muChina neyakaongororwa vhezheni yavo Yekutsvaga Injini. Zvikuru. Ndiri kufara ivo vanonzwisisa kuti izvi zvinodzosera sei maoko enguva pane vanhu vakadzvinyirirwa vanowana rusununguko.